Casharro BILAASH ah oo ku saabsan Internet Pornography & Sexting - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Blog Casharro BILAASH ah oo ku saabsan Internet Pornography & Sexting
Casharro BILAASH ah oo ku saabsan Internet Pornography & Sexting
adminaccount888 16th October 2020 News Latest
"Hawlaha internetka oo idil, porn waxay leedahay awooda ugu badan ee noqoshada balwad, Dhakhaatiirta neerfaha ee reer Holland ayaa leh Meerkerk et al.
Maqnaanshaha sharciga xaqiijinta da'da iyo halista sii xirnaanshaha halkaasoo carruurtu ay mas'uul ka yihiin inay si xor ah u booqdaan goobaha galmada, Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta waxay go'aansatay inay ka dhigto qorshayaasheeda casharka 'bilaash' inay ka caawiso macallimiinta, hoggaamiyeyaasha dhallinyarada iyo waalidiinta inay ka caawiyaan carruurtooda inay ka sii fiicnaadaan xulashooyinka.
Halkan waxaa ku yaal qorshaheenna casharrada casharka ku saleysan ee caddaynta ah ee loogu talagalay dugsiyada sare ee qaawan ee internetka iyo galmada. Qaabkeena gaarka ah wuxuu diirada saaraa maskaxda qaangaarka. Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa lagu aqoonsaday Kulliyadda Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud ee London si ay u maamusho tababar ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo jirka. Raadi casharrada halkan.
Waxaan dhageysanay ardayda, macalimiinta, hogaamiyaasha dhalinyarada iyo waalidiinta iskuulada iyo aqoon isweydaarsiyo. Waxaan baarnay boqolaal waraaqo cilmi baaris ah oo ku saabsan saameynta isticmaalka sigaarka ee dhalinyarada waqti kadib. Iyada oo gacan laga helayo in ka badan 20 xirfadlayaal oo ku kala baahsan waxbarashada, caafimaadka iyo sharciga, waxaan ku diyaarinnay casharo fiidiyowyo iyo wadahadallo. Waxaan rajeyneynaa in kuwani ay dhiirigelin u noqon doonaan dhalinyarada isla markaana kalsooni siin doonaan macallimiinta si ay u soo bandhigaan mowduucyadan khiyaanada leh. Waxaan ku soo qaadnay casharada UK oo dhan. Waxay u hoggaansamaan tilmaamaha ugu dambeeyay ee dowladda ee xiriirka iyo waxbarashada jinsiga.
Su'aalaha aan weydiino
Miyuu sawir-gacmeedku waxyeello leeyahay? Weydii xeerbeegtida ardayda. In "Pornography on Trial" waxaan ku soo bandhignay 8 qaybood oo cadeymo ah oo laga helay ilo kala duwan, kana soo horjeedo, si loogu ogolaado ardayda inay qiimeeyaan su'aasha naftooda.
Haddii porn-ka badankood ay lacag la’aan yihiin maxay PornHub iyo bogagga kale ee lulataaye u qiimeeyaan balaayiin doolar? “Filimada qaawan iyo caafimaadka maskaxda”, ardaydu waxay wax badan ka bartaan saameynta dhaqaalaha dareenka leh ee caafimaadka maskaxda. Waxay ogaadaan sida warbaahinta bulshada iyo boggaga internetka ee lulataaye si gaar ah loogu talagalay inay caado u noqdaan sameysmo si looga dhigo in isticmaaleyaashu ay doonayaan wax badan iyo in ka badan.
Miyuu sawir-gacmeedku saameyn ku yeeshaa caafimaadka maskaxda iyo jirka? "Galmada, Filimada qaawan iyo Maskaxda Dhallin-yarada" waxay daboolaysaa astaamaha iyo astaamaha isticmaalka badan. Miyey saameyn ku yeelaneysaa xiriirada? Maxay isticmaaleyaashu sameyn karaan haddii ay dareemaan dabin loola jeedo? Qorshayaasheena casharka waxay bartaan carruurta waxyaabaha ku saabsan astaamaha gaarka ah ee maskaxdooda qaangaarnimada iyo sababta galmada iyo galmada u noqdaan kuwa soo jiidasho leh laga bilaabo qaangaadhnimada.
Muxuu u egyahay is aamin, jacayl jacayl? Ardaydu waxay jecel yihiin inay ka wada hadlaan "Jacaylka, Filimada Qaawan iyo Xiriirka", si furan oo furan meel aamin ah. Xagee caawimaad ka raadsadaa haddii aan taageero u baahdo?
Sidee ayay mas'uuliyiinta sharciga u eegaan galmada? Ardaydu waxay baaraan daraasadaha kiisaska iyagoo ku saleynaya tusaalooyinka nolosha dhabta ah kuwa leh 11-14 sano jir iyo mid kale oo loo dejiyey 15-18 jir. Maxaa dhacaya haddii arday lagu dacweeyo booliska? Sidee ayey u saameyneysaa fursadaha shaqo ee mustaqbalka, xitaa iskaa wax u qabso? Qorshayaasha casharku waxay ka hadlayaan saameynta sharciyeed ee galmada.
Maxay yihiin wadayaasha muhiimka ah ee maskaxda, xooggeeda iyo dayacnaanta, inta lagu jiro horumarka qaangaarka? "Sexting, Pornography & Maskaxda Maskaxda" waxay ku ogaadaan sida ugufiican ee loo dhiso maskaxdooda si ay u noqdaan qof guuleysta.
Miyuu sawir-gacmeedka internetka sababi karaa cillad aan caadi ahayn, xitaa ragga da'da yar? Saameyn intee le’eg ayey ku leedahay xiriirkaas? Eeg horumarkii ugu dambeeyay ee cilmi baarista tan iyo hadalkii caanka ahaa ee TEDx, "The Great Porn Experiment" ee 2012.
Haddii aan arko ma joojin karo daawashada filimada qaawan xitaa markaan rabo, xaggee caawimaad ka raadsadaa? Casharradu dhammaantood waxay bixiyaan tilmaamo si ay uga caawiyaan khadka tooska ah ee u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku qiimeeyaan caawimaadda su'aalaha la oggolaaday iyo su'aalaha haddii ay soo saareen isticmaalka dhibaatada leh ee filimada iyo haddii, sidaas, halka laga helo caawimaad.
Casharrada ku saabsan sawir-gacmeedka internetka iyo galmada ayaa laga heli karaa daabacaadda Boqortooyada Midowday oo leh noocyo sharci oo gaar ah oo ku saabsan galmada ee Scotland, England iyo Wales, iyo sidoo kale daabacadaha Caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Labada daabacadood ee dambe kuma jiraan cashar ku saabsan galmada iyo sharciga.
Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir Mary Sharpe emayl ahaan: Mary@rewardfoundation.org.